Shanghai Bao Feng Oomatshini beMveliso yoLwakhiwo Co., Ltd.
I-SPL yasekwa ngo-2001 kwaye iyinkampani ephethwe ngokupheleleyo yiLianhe Chemical Technology Co, Ltd. (Yabelana ngekhowudi 002250). I-SPL ibekwe epakini yomzi mveliso waseBaoshan eShanghai, inonxibelelwano oluhle kakhulu kunye nenkqubo yezothutho, kufutshane nommelwane kunye nendlela engaphandle yesanghai, kunye ne-13km kude nesikhululo seenqwelomoya saseHongqiao, kunye ne-12km kude neSikhululo sikaloliwe saseShanghai. Umzi-mveliso we-SPL wakhiwe kwindawo engama-27,000m2, ebandakanya indawo ephambili yokwakha eyi-18,000m2. Inkampani i-ISO 9001: 2015 iqinisekisiwe kwaye ilandela ngokungqongqo izikhokelo ezibekwe phantsi kwale nkqubo yolawulo loMgangatho.
I-SPL ikhethekileyo kuphuhliso, uyilo, ukuthengisa kunye neeprojekti zokujika izixhobo zezixhobo zotshintshiselwano ngobushushu. Iimveliso zethu eziphambili zezi-condenser evaporative, umoya opholileyo, opholileyo womoya opholileyo, ivali yokupholisa yesekethe evaliweyo, izixhobo ezincedisayo zokubandisa, isitya soxinzelelo, inkqubo epholileyo yokugcina iBakala D1 kunye ne-D2. Kukho ngaphezu kwe-30 uthotho kunye ne-500 yeentlobo zeemveliso ezisetyenziselwa ukupholisa isiguquli somoya, iZiko leMetallurgical Ukupholisa, iSithando somlilo sokupholisa, Ukupholisa iZiko lokuTshisa, iHVAC yokupholisa, ioyile kunye nezinye iinkqubo zokupholisa ulwelo, uMthombo woMbane weMpompo yokuPholisa, idatha Amaziko, abaGuquli bamaRhoqo, oomatshini bokufaka inaliti, Imigca yokuPrinta, iiDrawbenches, iZiko leZiko lePolycrystalline, njl.njl.
Izixhobo zeMveliso ye-Hi-Tech
Izixhobo zethu ezingundoqo zokuvelisa zingeniswa ngqo zisuka eJamani.
Sineenjineli eziphezulu ezi-6, iinjineli ezili-17, iinjineli ezincedisayo ezingama-24 kwiziko lethu le-R & D, bonke ngoogqirha okanye oonjingalwazi abavela kwiDyunivesithi yezeNzululwazi neTekhnoloji yase China.
3.1 Izinto ezingwevu ezingundoqo.
Ama-55% eAluminiyam- Uluncedo: Ukumelana nobushushu, ixesha elide lokuphila
I-43.4% iZinc—— Isibonelelo: Ukunganyangeki kwebala
I-1.6% ye-Silicon -luncedo: Ukumelana nobushushu
ISuper Galum ligama lophawu lwentsimbi engama-55% ye-aluminium-zinc. I-Super Galum bubushushu obuninzi kunye nokumelana nokubola, ukudibanisa iipropathi zealuminium ezinikezela ukomelela okuzinzileyo, ukumelana nobushushu okugqwesileyo, ukubanzima, kunye nezo zinc ezinikezela ubushushu obuphezulu kunye nokukhuseleka okuhle. I-Super Galum yimitha emithathu ukuya kwisithandathu xa kuthelekiswa ne-zinc enexabiso lesinyithi eliqhelekileyo.
I-coil ye-SPL's coensing coils yenziwa kwi-SPL ukusuka kwizinga eliphezulu le-tubing yensimbi kulandela ezona nkqubo zingqongqo zolawulo lomgangatho. Isekethe nganye iyahlolwa ukuqinisekisa umgangatho ophakamileyo wezinto eziphathekayo.
Khusela iikhoyili ngokuchasene nokubola, iikhoyili zibekwa kwisakhelo esinzima sentsimbi emva koko indibano iphelele ifakwe kwizinc etyhidiweyo (idiphu eshushu eshushu) kwitempile engu-427oC, iityhubhu zigxunyekwe kwicala lokuhamba kolwelo ukubonelela ngamanzi amdaka.
Iikhabhathi ze-BTC zamkela i-dacromet bolt ukudibanisa, i-inoxidability igqibelele ngakumbi kuneebholtshi eziqhelekileyo, ngeli xesha iqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo okupholileyo ixesha elide.
Ulondolozo olukhethekileyo olunelungelo elilodwa lomenzi lwe-SPL lokugcina isepha engenazihlunu ngelixa uhlala unikezela nangokusasazwa kwamanzi ngokuthembekileyo, esikalini -ukungabikho kokupholisa komphunga phantsi kwazo zonke iimeko zokusebenza. Ngaphaya koko, iisefu zifakwe kumbhobho -imibhobho yokuhambisa amanzi yasimahla kwaye inomsonto wokugqibela.
Ngokudibeneyo, ezi zinto zidibeneyo zibonelela ngokugubungela iikhoyili ezingalinganiyo kunye nothintelo olwenziweyo, olwenza ukuba ziqhube kakuhle kakhulu kunikezelo lwamanzi olungenakubola, nolungalondoloziyo.
Ukusebenza okuphezulu kweNokia ukuqhuba imoto, ukuhamba kobunzima kunye nengxolo ephantsi. Isebenzisa ukungabikho kokuqhuba kuthintelwe uphawu oluphezulu lomatshini, ukuvuza ngokukhululekileyo kunye nexesha elide lobomi.
Ilungelo lomenzi PVC zohlobo lobusi Akunakuba
Uyilo lokugcwalisa lwe-SPL® olusetyenziswe kwimigca ye-S evaporative condenser kunye nenqaba yokupholisa yenzelwe ngokukodwa ukudibanisa ukuxubana komoya kunye namanzi kugqithiso lobushushu. Iingcebiso ezikhethekileyo zokuhambisa amanzi zivumela ukulayishwa okuphezulu kwamanzi ngaphandle koxinzelelo olugqithisileyo. Ukugcwaliswa kwakhiwe nge-inert polyvinyl chloride, (PVC). Ayizukubola okanye ibole kwaye yenzelwe ukumelana namaqondo obushushu bamanzi angama-54.4ºC. Ngenxa yendlela eyahlukileyo yobusi -ibhokisi apho amaphepha anqamlezileyo enxityelelaniswe kunye, kunye nenkxaso esezantsi yecandelo lokugcwalisa, ukuthembeka kwesakhiwo sokugcwalisa kuyaphuculwa kakhulu, kusenza ukuba ukuzaliswa kusetyenziswe njengeqonga lokusebenza. Ukuzaliswa okukhethiweyo kwi-Condenser kunye neNqaba yokuPholisa kuneempawu ezintle zokumelana nomlilo.
Ngenkqubo yokupasa i-louver ezimbini, amathontsi amanzi afakwa kwindawo yangaphakathi ethambekisayo, ukunciphisa iingxaki zokuphuma. Uyilo olwahlukileyo lwe-SPL lazo zonke ii-SPL's N imigca evale ngokupheleleyo indawo yeebheseni. Ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kuthintelwe emanzini ngaphakathi kwi-condenser kunye nenqaba yokupholisa, ngaloo ndlela kuncitshiswa ukubakho kwe-algae. Ukucocwa kwamanzi kunye nokugcinwa kwexabiso kuncitshiswe kakhulu. Ngelixa liqukethe ngokufanelekileyo amanzi ajikelezayo kunye nokuthintela ukukhanya kwelanga, uyilo lwe-louver lunokwehla koxinzelelo olusezantsi. Ukuhla koxinzelelo olusezantsi kubangela ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, okunciphisa iindleko zokusebenza kwinqaba yokupholisa.
Isitya sokuthambeka esicocekileyo
Itekhnoloji ye-Coil ye-Elliptical ePhambili
Uchungechunge lwe-BTC-Uhlobo olutsha lwe-wallboard drainage-Design Patent
Umngxunya omtsha wokuhambisa amanzi kwikona egobileyo ye-wallboard yenzelwe ukukhupha amanzi emvula, ukunciphisa i-bolts kunye ne-wallboard corrosion, yenza isiphumo esincinci kwisitywina nakwimbonakalo iphela, kwaye wandise ubomi benkonzo.
Iimveliso zothotho lwe-SPL ziyilelwe ukuba zithunyelwe kwikhithi ukusuka kuloo nto ingena kwizikhongozeli.
Iminyango yokuFikelela enkulu kunye negumbi langaphakathi elinobubele lenza uviwo kunye nokulungiswa okufanelekileyo. Ileli emathambekeni ngaphandle kulula ukuyinyusa nokuyihla.
Iqhude lebhola kunye nefilitha ye-SPL Series inokuvavanywa kwaye ilungiswe ngaphandle kokumisa ukusebenza kwe-condenser ngenxa yendlela efanayo yokuhamba komoya kunye nokuhamba kwamanzi. Imilomo yemilomo kunye neekhoyili nayo inokuvavanywa kwaye ilungiswe ngexesha lokusebenza.
3.2 Ukugqitywa koVavanyo lweeMveliso.
Sizinikezele ekwakheni amashishini okuqala, enza iimveliso zodidi lokuqala. I-CTI (iZiko lobuGcisa beTekhnoloji) evela e-USA iqinisekisile iiTowering Towers zethu minyaka le, ukusebenza kwethu ngemveliso kusinike isikhundla esiphambili eTshayina.
I-China Fist igesi yendalo iprojekthi yokupholisa evaporative kwi-CNOOC
I-China Fist sulphur dioxide ifuthe lokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwiMigodi eseNtshona
I-China Fist Ethyl acetate iprojekthi yezityalo kwiXinfu Bio.
I-SPL yasekwa ngo-2001 kwaye ibisoloko ivelisa ubushushu obuguqula iminyaka engama-20. Sinophando lwangaphakathi endlwini kunye nokukwazi ukukhula, kunye nenqanaba loshishino eliqhubekekayo ekusebenzeni, unyango lobushushu, ukuvelisa, ukuvavanywa komzimba kunye nokuvavanywa kwemichiza, ubuchule bolawulo lomgangatho.
Iqela labasebenzi abagqwesileyo linikezelwe kumgangatho ophezulu wezixhobo zokutshintshisa ubushushu kunye namava eminyaka kwi-R & D nakwimveliso. Iqela libandakanya iinjineli eziphezulu ezi-6, iinjineli ezili-17, iinjineli ezingama-24, kunye neengcali ezingama-60. Inkampani inezinto ezininzi zokuqhubela phambili kunye nezixhobo zokuhlola ezivela ekhaya kunye nokukhwela, njengeziko lokuzenzekelayo, umatshini we-X-ray, umatshini we-ultrasonic, umatshini wokuvavanya othusayo, umatshini wokuvavanya uxinzelelo. Indawo ekhokelayo kushishino lwe-SPL iqinisekisiwe ngokuzisa ngokupheleleyo itekhnoloji yasekhaya kunye nokukhwela, ukuthatha izibonelelo, kunye nobuchule bokuchwetheza kunye nobuchule.
Uhlobo lomhlaba luxhaswa yinkcubeko. Siyiqonda ngokupheleleyo inkcubeko yakhe yokudibanisa inokwenziwa kuphela ngeempembelelo, ukungena kunye nokudityaniswa. Ukuphuhliswa kweqela lethu kuxhaswe ngamaxabiso asisiseko kule minyaka idlulileyo -------Ukunyaniseka, ubuGcisa, uxanduva, ukusebenzisana.
Iqela lethu lihlala lihambelana nomgaqo, ojolise ebantwini, kulawulo lwengqibelelo,
umgangatho konke, igama premium Ukunyaniseka iye
owona mthombo wokhuphiswano lweqela lethu.
Ukuba nomoya onjalo, sithathe onke amanyathelo ngendlela engagungqiyo kwaye eqinile.
Ukuyilwa kwezinto kuyinto ephambili kwinkcubeko yeqela lethu.
Ukutsha kukhokelela kuphuhliso, okukhokelela ekonyukeni kwamandla,
Zonke zivela kwizinto ezintsha.
Abantu bethu benza izinto ezintsha kumxholo, indlela, iteknoloji kunye nolawulo.
Ishishini lethu lihlala likwimeko esebenzayo ukulungiselela utshintsho olucwangcisiweyo kunye nokusingqongileyo kwaye lilungiselelwe amathuba avelayo.
Iqela lethu linoluvo olomeleleyo loxanduva kunye nomsebenzi kubathengi nakuluntu.
Amandla oxanduva olunjalo awunakubonwa, kodwa anokuvakala.
Ibihleli ingamandla okuqhuba kuphuhliso lweqela lethu.
Intsebenziswano ingumthombo wophuhliso
Sizabalazela ukwakha iqela elisebenzisanayo
Sebenzani kunye ukudala imeko yokuphumelela ithathwa njengeyona njongo ibalulekileyo kuphuhliso lweshishini
Iqela lethu likwazile ukufezekisa ukudityaniswa kwezixhobo, ukuhambelana ngokudibeneyo,
vumela abantu abaqeqeshiweyo banike umdlalo opheleleyo kubungcali babo
IMISEBENZI EYOYIKEKAYO UKUBA IQELA LETHU LIYE LABA negalelo kubathengi bethu!
S- UKHETHEKILE ukuphumeza i-win-win-win
Gxila kuphuhliso, uyilo, ukuvelisa, ukuthengisa kunye neenkonzo zeprojekthi yezixhobo zokudlulisa ubushushu;
Ukuseka ubudlelwane obusondeleyo neYunivesithi yaseShanghai Jiao Tong, kwiYunivesithi yaseTshayina yeTekhnoloji, iYunivesithi yaseShanghai Ocean, iYunivesithi yase-China yezeNzululwazi neTekhnoloji, iYunivesithi yaseHarbin yezoRhwebo,
Ukuba nelungelo elilodwa lomenzi wechiza kunye neemodeli ezisetyenziswayo ezingama-22;
Yiba iteknoloji kunye nesiseko sophando kwiYunivesithi yaseTshayina yeTekhnoloji kuTshintsho lobushushu oluphuculweyo kunye nokugcina amandla;
Thatha inxaxheba kuqulunqo lwemigangatho emi-6 yaseShanghai ngolu hlobo:
✔ "I-evaporative condensers yexabiso lokunciphisa amandla kunye nokulinganiswa kwamandla"
✔ "Ukugcinwa kwamandla okubandayo kwiyunithi yexabiso elinomda kunye nokulinganiswa kwamandla"
✔ "Inkqubo esemgangathweni yolawulo lwamandla eshishini"
✔ "Imilinganiselo yokukhuselwa kwemveliso ebandayo yokugcinwa kwemveliso ebandayo"
✔ "Ukuvalwa kwemigangatho yokupholisa amandla okuvalwa kwenqaba"
✔ "Inkqubo yokubumba inyani ye-axial fan energy kunye nokugcina amandla okusindisa amanani amaxabiso"
Thatha inxaxheba kumgangatho wokuvavanywa komgangatho wokuvavanywa kwelebhu yefriji evaliweyo yomoya ovela kude.
P- UBUNGCALI othembekileyo
✔ Ungumnini weqela leenjineli zeR & D ezibalaseleyo kunye nabasebenzi abanezakhono abanamava eminyaka.
✔ imveliso Own advanced kunye novavanyo koomatshini ezifana kwiziko welding oluzenzekelayo, oomatshini ifuthe uvavanyo, njl
✔ Ungumnini wemveliso yombhobho ohamba phambili kakhulu wasekhaya, kunye nokugoba umbhobho.
✔ Yakho i-D1, uyilo loxinzelelo lwe-D2 kunye nelayisensi yokuvelisa.
✔ Isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001-2015.
✔ Ukupasa isiqinisekiso seCTI.
✔ Eyakho isiqinisekiso sokufakwa koxinzelelo kumbhobho we-GC2.
Ukuphucula isoftware yohlalutyo lwe-evaporative kunye neYunivesithi yaseShanghai Ocean, kwaye unikwe isatifikethi sobhaliso lwesoftware yekhompyuter yeNCAC.
✔ IShanghai yezeNzululwazi kunye neTekhnoloji yeShishini lokuZala.
✔ Ishishini le-High-Tech laseShanghai.
✔ Ukuyilwa kweNzululwazi yeTekhnoloji kunye neTekhnoloji-ibhaso lesibini.
✔ Inkqubela phambili yeSayensi kunye neTekhnoloji yeShanghai- Ibhaso lesithathu.
Iklasi yeKhontrakthi yeShanghai yeAAA.
Ilungu loMbutho woLondolozo lwaMandla eShanghai.
ILungu eliLawulayo loMbutho wamaShishini eSayensi kunye neTekhnoloji yeShishini.
Ilungu loMbutho weShanghai woPhuculo lweNzululwazi neTekhnoloji.
L- UKUKHOKELELA uphuhliso loshishino
✔ Ityala lokuqala le-Shanghai Gaoqiao Sinopec iprojekthi yokupholisa ukuqhekeza yokuthambisa;
✔ Ityala lokuqala lelizwe le-CNOOC (China National Offshore Oyile Corporation) iprojekthi yokupholisa irhasi yendalo;
✔ Ityala lokuqala lelizwe laseNtshona-mpuma yemigodi yesalfure dioksayidi eqinisa iprojekthi yokurisayikilisha;
✔ Ityala lokuqala lelizwe le-XIN FU biochemical ethyl acetate iprojekthi yokupholisa ngumphunga;
UMBONISO AMANDLA UBONISA
Ukwazi ngakumbi ngathi, kuya kukunceda ngakumbi
01 Inkonzo yokuthengisa kwangaphambili
-Ukuphanda kunye nenkxaso yokubonisana namava kwiminyaka engama-20 yobuchwephesha.
-Injineli-yentengiso yokuthengisa inkonzo yobunjineli.
Umnxeba oshushu wenkonzo uyafumaneka nge-24h, uphendule nge-8h.
02 Emva kwenkonzo
Ukuvavanywa kwezixhobo zoqeqesho lobuchwephesha;
-Ukuhlohla kunye nokulungisa ingxaki yokuSombulula;
Uhlaziyo lwesondlo kunye nophuculo;
Isiqinisekiso sonyaka omnye. Nika inkxaso yobuchwephesha simahla kubo bonke ubomi beemveliso.
-Gcina ubomi bonke benxibelelana nabathengi, fumana ingxelo ngokusetyenziswa kwezixhobo kwaye wenze umgangatho weemveliso uqhubeke ugqibelele.